October 16, 2021 – democracy for burma
မြောင်နယ်မှာ မဟာမိတ် ၁၃ ဖွဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှု စစ်ကောင်စီ ရဲ ၁၂ယောက်သေ – Myaung
On October 16, 2021 By Burma Myanmar newsIn UncategorizedLeaveacomment
မြောင်နယ်မှာ မဟာမိတ် ၁၃ ဖွဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှု စစ်ကောင်စီ ရဲ ၁၂ယောက်သေRiSE News| အောက်တိုဘာ ၁၆မြောင်မြို့နယ်မှာ ရဲအချုပ်ယာဉ်တန်းကို မဟာမိတ် ၁၃ ဖွဲ့ပေါင်းပြီး ဒီကနေ့ တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာ စစ်ကောင်စီ ရဲ ၁၂ ယောက်သေတယ်လို့ မဟာမိတ်တပ်တွေက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီမနက် ၉နာရီ ၄၅မိနစ်လောက်မှာ မြောင်နယ် ဘိုးမင်းကြီးကင်းရွာနဲ့ ကြော့မင်းရွာကြားမှာ မိုင်း ၄ လုံးဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး မဟာမိတ်တပ်တွေဘက်က ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိဘူးလို့ ဖော်ပြပါတယ်။ ရဲအလောင်းတွေကို စစ်ကောင်စီက လာကောက်ယူသွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ ငရဲသားကောင်တွေကို မိုင်းခွဲပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်လို့လည်း ရေးသားဖော်ပြပါတယ်။
Military Council has clarified that the president was “asked to leave.”
On October 16, 2021 October 17, 2021 By Burma Myanmar newsIn UncategorizedLeaveacomment
A doctor who revolutionized and treated medicine
On October 16, 2021 By Burma Myanmar newsIn MYANMAR, myanmar.burmaLeaveacomment
“တော်လှန်ရေးလည်းလုပ် ဆေးလည်းကုသပေးတဲ့ ဒေါက်တာလေး
Karenni Nationalities Defense Force -KNDF Loikaw Zone
On October 16, 2021 By Burma Myanmar newsIn Asean, MYANMARLeaveacomment
KNDF/ B-02မှ စေတနာ့ဆေးဝန်ထမ်းတချို့မှ ဒဏ်ရာရတော်လှန်ရေးရဲဘော် တချို့အား အရေးပေါ်အသေးစားခွဲစိတ်မှူနှင့် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်။ မိဘပြည်သူများအနေဖြင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများပါဝင်လှူဒါန်းလိုပါက Page Chat box တွင်လာရောက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။#အရေးတော်ပုံမုချအောင်ရမည်#KNDF/ B-02 သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန
Some volunteers at KNDF / B-02 performed emergency surgery and health checks to some injured revolutionaries
EDUCATION and HEALTHCARE For MYANMAR
On October 16, 2021 October 16, 2021 By Burma Myanmar newsIn Asean, MYANMAR, whatshappeninginMyanmarLeaveacomment
မင်္ဂလာပါEducation and Healthcare for Myanmar ရဲ့ ရံပုံငွေထောက်ပံ့ရေးအစီစဉ်မှ ကံစမ်းမဲလက်မှတ်များကို ရောင်းချပေးသွားမည့်အစီစဉ်လေးကိုမိတ်ဆက်‌ပေးပါရစေနော်ကံစမ်းမဲလက်မှတ်များဝယ်ယူလိုသူများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်စသည့် အချက်အလက်များကို Page Messenger မှတစ်ဆင့် ပေးပို့၍ ဝယ်ယူနိုင်သလို၊ တာဝန်ခံများ၏ ဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်၍ ဝယ်ယူ ကံစမ်းလို့ ရပါပြီ၊မိမိတို့ရဲ့ ကံစမ်းမဲများဖြင့် ပြည်သူ့အစိုးရ(NUG)ကို ဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့ပေးလိုက်ကြပါစို့။ကံစမ်းမဲဖွင့်ပွဲကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရူလိုသူများအနေဖြင့် အောက်ပါ QR Code ကို Scan ဖတ်ပြီး ကံစမ်းမဲဖွင့်ပွဲကို တိုက်ရိုက် ကြည့်ရူနိူင်ပါသည်။ဝယ်ယူအားပေးမူအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Hello #Migalarpar Let me introduceaprogram that will sell lottery tickets from Education and Healthcare for Myanmar fundraising program. Those who want to buy lottery tickets must provide their name and address. Home address information such as phone number can be sent via Page Messenger. You can now try your luck by contacting the phone number of the person in charge. Let us ‘#support the People‘s Government NUG with our lotteries. If you want to watch the lottery live, you can scan the following QR Code and watch the lottery live. Thank you for your support.